Vaovao - Fahalalana momba ny fikojakojana ny kojakoja fiara
Ny kalitaon'ny fikojakojana ny bobongolo fiara dia tsy vitan'ny hoe misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny bobongolo, fa misy fiantraikany lehibe amin'ny drafitra famokarana, ary misy fiantraikany amin'ny vidin'ny famokarana farany.
Ny mpiasan'ny fikojakojana izay tompon'andraikitra amin'ny fikojakojana isan'andro ny lasitra fiara dia tsy maintsy miasa amim-pitandremana sy amim-pitandremana mba hiantohana ny toe-javatra tsara indrindra amin'ny bobongolo, ary mahomby sy ara-toekarena mandritra ny famokarana araka ny fandaharam-potoana, ary mampihena ny vidin'ny famokarana araka izay tratra.Ireto manaraka ireto dia fahalalana fototra momba ny fikojakojana nangonin'i Aojie Mold ho anao.
Rehefa manamboatra fikojakojana ny kojakoja fiara dia ilaina ny manamarina ny ampahany araka ny sary.Na dia tsy misy toromarika manokana aza, dia tsy maintsy hojerena mandritra ny fitahirizana izany;Tsy azo atao ny manova ny haben'ny ampahany amin'ny bobongolo izay tsy mahafeno ny fepetra takian'ny sary, na mampiasa spacer na gaskets ho an'ny fampidirana fanampiny, sns.;fikojakojana bobongolo taorian'ny fahavitan'ny baiko famokarana, Tsy maintsy manondro ny olana omen'ny departemanta famokarana, ny firaketana an-tsoratra sy ny vokatra farany;amin'ny fikojakojana ny bobongolo kojakoja fiara, raha misy olana lehibe hita, dia tokony hanao tatitra avy hatrany amin'ny mpanara-maso izy ireo ary miandry ny toromarika.
Faharoa, ny fepetra manokana amin'ny fikojakojana ny kojakoja fiara: rehefa manolo ny ampahany amin'ny bobongolo, dia manamafy fa ny kalitaon'ny ampahany hosoloina dia mahafeno fepetra;ny famongorana sy ny fivorian'ny ampahany tsirairay dia tokony hotapahana ary tsindriana tsikelikely;rehefa tafangona ny fampidirana bobongolo kojakoja fiara, hamafiso fa mahafeno fepetra ny elanelana mety;Fadio ny fikorotanana, ny scratches, ny lavaka, ny tain-drendrika, ny kilema, ny harafesina, sns. eo amin'ny faritra;raha misy ampahany nosoloina, mifandray sy manamafy amin'ny sampana famolavolana bobongolo ara-potoana.Alohan'ny sy aorian'ny famongorana ny bobongolo, tandremo ny fitazonana ny fifandanjana misintona ny ampahany tsirairay;raha misy Ny kojakoja tokony hosoloina dia tokony hosoloina ara-potoana.
Farany, ny fikojakojana isan'andro ny lasitra fiara dia tsy maintsy atao amim-pitandremana sy amim-pitandremana mba hahazoana antoka fa ny bobongolo kojakoja fiara dia tazonina amin'ny toe-javatra tsara kokoa amin'ny fotoana rehetra.